Can Repeated Ultrasound give effect to Baby – – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
Can Repeated Ultrasound give effect to Baby –
ကှနျပွူတာ ဓာတျမှနျ Ultrasound ခဏခဏရိုကျတာ ကလေးထိခိုကျနိုငျလား?
ကှနျပွူတာ ဓာတျမှနျ Ultrasound ရိုကျတယျဆိုတာ ကိုယျဝနျဆောငျစဉျ ၉ လကာလအတှငျးမှာ ကလေးအနအေထားသိဖို့၊ အခငျြးအနအေထားသိဖို့၊ ရမှောရညျ အနညျးအမြားသိဖို့၊ ယောကျြားလေးမိနျးကလေးသိဖို့၊မှေးမယျ့ခနျ့မှနျရကျသိဖို့ ရိုကျကွပါတယျ။
ပုံမှနျကိုယျဝနျဆိုရငျတော့ Ultrasound တဈကွိမျ၊ နှဈကွိမျခနျ့ ရိုကျရတတျပါတယျ။ တဈခြို့လညျး လိုအပျခကျြအရ၊ ဆရာဝနျညှနျကွားခကျြအရ အကွိမျရမြေားမြားရိုကျရတတျပါတယျ။
Ultrasound ရိုကျတာ အန်တရာယျကငျးမကငျးသိနိုငျဖို့အရငျဆုံးUltrasound ဘယျလိုရိုကျတယျဆိုတာ ပွောပွခငျြပါတယျ။Ultrasound ရိုကျတဲ့အခါ အသံလှိုငျးတှထှေကျပါတယျ ။ ဒီအသံလှိုငျးတှကေ ကလေးဆီကိုရောကျသှားပွီး တနျပွနျလာတဲ့အခါ ပုံရိပျလေးတှထှေကျပျေါလာပါတယျ။ဒီလို ထှကျလာတဲ့လှိုငျးတှနေဲ့အတူ အပူဓာတျတှပေါထှကျပါတယျ။သိပျစိတျပူစရာမလိုတာကတော့ ထှကျလာတဲ့ အပူဓာတျဟာ နညျးလှနျးပွီး 1°C ထကျနညျးတယျလို့ဆိုပါတယျ။ဒါ့အပွငျ ဒီအပူလှိုငျးဟာ ကလေးဆီကို တိုကျရိုကျရောကျမှာမဟုတျဘဲ ရမှောရညျကို ဖွတျသေးတာမို့ ကလေးဆီရောကျတာအတျောနညျးသှားပါတယျ။ဓာတျမှနျဆရာဝနျကလညျး တဈနရောထဲကိုရိုကျတာမဟုတျဘဲ ဗိုကျအနှံရိုကျတာမို့ ကလေးရဲ့ ကိုယျအဂါင်္ အစိတျအပိုငျး တဈခုထဲကို ထိခိုကျမှာတေ့ာမပူရပါဘူး။
ဒါဆို Ultrasound ကလုံးဝစိတျခရြတဲ့ စဈဆေးမှုလား?
တကယျ့လကျတှမှေ့ာ Ultrasound ဟာအရမျးအသုံးဝငျတဲ့ အခကျြအလကျတှအေမြားကွီးပေးတဲ့ လှယျကူတဲ့ စဈဆေးမှုပါ။တိုးတကျလာတဲ့ ဆေးပညာလောကမှာ စကျပစ်စညျးအသဈတှေ၊ ဆေးအသဈတှအေမြားကွီးပျေါလာတဲ့အထဲမှာ Ultrasound ပျေါလာတာ ၁၀နှဈကြျောပဲ ရှိပါသေးတယျ။ဒီ နှဈတှအေတှငျးမှာတေ့ာ Ultrasoundရိုကျလို့ကလေးထိခိုကျတယျဆိုတဲ့သကျသတှေတေော့မရှိသေးပါဘူး။ ဒါတှကွေောငျ့ ကိုယျဝနျဆောငျစဉျကာလအတှငျးမှာ *၅*ကွိမျအထိ စိတျခလြကျခရြိုကျနိုငျတယျလို့ဆိုပါတယျ။ဒီထကျပိုရိုကျဖို့လိုမယျဆိုရငျတော့ ဆရာဝနျက ကောငျးကြိုးဆိုးကြိုး ၊ လိုအပျမလိုအပျကို ခငျြ့ခြိနျပေးပါလိမျ့မယျ။ဒါကွောငျ့မမေတေို့ကိုပွောခွငျတာကတော့ Ultrasoundကို ဆရာဝနျညှနျကွားလို့လိုအပျမှသာရိုကျကွပါလို့။
ကွန်ပြူတာ ဓာတ်မှန် Ultrasound ခဏခဏရိုက်တာ ကလေးထိခိုက်နိုင်လား?
ကွန်ပြူတာ ဓာတ်မှန် Ultrasound ရိုက်တယ်ဆိုတာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ၉ လကာလအတွင်းမှာ ကလေးအနေအထားသိဖို့၊ အချင်းအနေအထားသိဖို့၊ ရေမွှာရည် အနည်းအများသိဖို့၊ ယောကျာ်းလေးမိန်းကလေးသိဖို့၊မွေးမယ့်ခန့်မှန်ရက်သိဖို့ ရိုက်ကြပါတယ်။
ပုံမှန်ကိုယ်ဝန်ဆိုရင်တော့ Ultrasound တစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ခန့် ရိုက်ရတတ်ပါတယ်။ တစ်ချို့လည်း လိုအပ်ချက်အရ၊ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်အရ အကြိမ်ရေများများရိုက်ရတတ်ပါတယ်။
Ultrasound ရိုက်တာ အန္တရာယ်ကင်းမကင်းသိနိုင်ဖို့အရင်ဆုံးUltrasound ဘယ်လိုရိုက်တယ်ဆိုတာ ပြောပြချင်ပါတယ်။Ultrasound ရိုက်တဲ့အခါ အသံလှိုင်းတွေထွက်ပါတယ် ။ ဒီအသံလှိုင်းတွေက ကလေးဆီကိုရောက်သွားပြီး တန်ပြန်လာတဲ့အခါ ပုံရိပ်လေးတွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ဒီလို ထွက်လာတဲ့လှိုင်းတွေနဲ့အတူ အပူဓာတ်တွေပါထွက်ပါတယ်။သိပ်စိတ်ပူစရာမလိုတာကတော့ ထွက်လာတဲ့ အပူဓာတ်ဟာ နည်းလွန်းပြီး 1°C ထက်နည်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင် ဒီအပူလှိုင်းဟာ ကလေးဆီကို တိုက်ရိုက်ရောက်မှာမဟုတ်ဘဲ ရေမွှာရည်ကို ဖြတ်သေးတာမို့ ကလေးဆီရောက်တာအတော်နည်းသွားပါတယ်။ဓာတ်မှန်ဆရာဝန်ကလည်း တစ်နေရာထဲကိုရိုက်တာမဟုတ်ဘဲ ဗိုက်အနှံရိုက်တာမို့ ကလေးရဲ့ ကိုယ်အဂါင်္ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုထဲကို ထိခိုက်မှာတေ့ာမပူရပါဘူး။
ဒါဆို Ultrasound ကလုံးဝစိတ်ချရတဲ့ စစ်ဆေးမှုလား?
တကယ့်လက်တွေ့မှာ Ultrasound ဟာအရမ်းအသုံးဝင်တဲ့ အချက်အလက်တွေအများကြီးပေးတဲ့ လွယ်ကူတဲ့ စစ်ဆေးမှုပါ။တိုးတက်လာတဲ့ ဆေးပညာလောကမှာ စက်ပစ္စည်းအသစ်တွေ၊ ဆေးအသစ်တွေအများကြီးပေါ်လာတဲ့အထဲမှာ Ultrasound ပေါ်လာတာ ၁၀နှစ်ကျော်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ဒီ နှစ်တွေအတွင်းမှာတေ့ာ Ultrasoundရိုက်လို့ကလေးထိခိုက်တယ်ဆိုတဲ့သက်သေတွေတော့မရှိသေးပါဘူး။ ဒါတွေကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ကာလအတွင်းမှာ *၅*ကြိမ်အထိ စိတ်ချလက်ချရိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီထက်ပိုရိုက်ဖို့လိုမယ်ဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်က ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုး ၊ လိုအပ်မလိုအပ်ကို ချင့်ချိန်ပေးပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မေမေတို့ကိုပြောခြင်တာကတော့ Ultrasoundကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားလို့လိုအပ်မှသာရိုက်ကြပါလို့။
Conditions that can cause sudden increase in blood pressure